Ghọọ Uhie okpu akwụkwọ injinia | Aka RHCE
Kedu na ihe kpatara iji nweta akara uhie okpu
Kedu ihe nyocha nke RHCSA?
Nke a bụ nkọwa nke nyocha RHCSA:
Ntak-eme Ụkpụrụ Uhie Ụkpụrụ Injinia Akaụntụ?
Ọ bụ Red Hat Enterprise Linux® (RHEL) nke na-arụ ọrụ na Red Hat Enterprise Linux® (RHEL) na-enweta ihe nkesa nke Red Hat Certified Administrator System (RHCSA) nwere ikike ọzọ, uche, na ike ya. . Ị nwere ike ịbanye na RHCE ozugbo ị na-ahụ ịkwadebe maka RHSCA ma merie nkwenye gị.
Ntuziaka RHCSA bụ ọkwa dị n'etiti ndị iru eru kachasị ghọtara site na Uhie Uhie. N'ozuzu, Okpu Uhie na-enye nyocha nyocha mgbe ịmalitere usoro nkwadebe. A kwadoro nkwadebe a maka ndị ọkachamara IT nwere ọtụtụ ebe dị iche iche nke na-arụ ọrụ nlekọta nchịkwa Linux dị oke mkpa tinyere nhazi, ime njikọta netwọk, ilekọta nchekwa anụ ahụ, na nchebe nchebe dị mkpa.
Ọ bụrụ na ị gbalịa ịkwụsị RHCE n'ụzọ doro anya, ị kwesịrị ịga na weebụsaịtị Red Hat ma chọpụta onye ọrụ ịkwadebe na mpaghara gị. Ị nwere ike ịkpọtụrụ ọkachamara ndị ọkachamara ma tinye maka RHCSA. Iji kpochapụ ule Uhie Ọkpụkpọ Ụlọnga, ịkwesịrị iburu na nke ọ bụla n'ime isiokwu nke mmemme nkwadebe na na mgbakwunye akụkụ dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, atụmatụ nke ndokwa netwọk. A na-enweta ihe ndị a na ihe nkwadebe na ihe ntanetị nke onye nọnyeere nkwadebe. I nwere ike igosi ule ugwo uhie okpu uhie na oge gi amara. Oge nyocha ahụ na-eduzi na nchekwa dị mma na-elekwasị anya na-elezi anya nke ọma. Ọzọkwa, ị nwere ike ịnweta gander na Uhie okpu dị iche iche na-akwadebe nhọrọ ma gbasie mbọ ike itinye oge nyocha gị.
Ihe nyocha ule nke RHCSA na-enye ntọala ka ndị nwere olileanya na-anwa imebi ndị na-achịkwa usoro Linux site na mmepụta nke nkwekọrịta ọnụahịa dị mkpa na ntinyekwu ngwaọrụ. A na-agbakwụnye nkwupụta ndị a n'ime ọrụ a, Red Hat System Administration II.
Okwu Mmalite iji nye iwu ntụziaka
Ịnweta ụdị faịlụ Linux
Ịmụ ihe na nhazi nke ọrụ software na components
Ịmepụta ma na-emejuputa usoro nyocha
Ịtọ ntọala firewall na njikọ netwọk
Usoro nhazi na nlekota oru
Nweghachi faịlụ log nke usoro
Ijikwa otu na ndị ọrụ
Nkwenye RHCSA bụ isi nke na-agbanye n'ime RHCE. Ụkpụrụ Mkpuchi Uhie na-adabere na ndị ọkachamara, ndị na-achịkwa ụkpụrụ, ndị nchịkwa ngwa ngwa, ndị nhazi, na ndị na-emepụta ihe na-eme ihe n'agbanyeghị na ndị isi ojii na ndị na-achị igwe ojii, bụ ndị na-egbu RHEL na ntọala IT ha. Omume ahụ na-eme ka ndị na-asọmpi nwee ike ịmalite ịma nke ọma na RHEL site n'ịchọ nyocha ndị siri ike mgbe a ga-egbu ha. Mgbe ị na-agagharị ule uhie na uhie uhie, ị na-enweta nkwenye nke Uhie okpu na-eme ka nnapụta. Nke a na-enye gị ohere iji nweta Uhie Uhie ndị mmadụ, jikọọ na ihe ndị nwere ike ime, mgbakọ na-eche echiche na imekọ ihe ọnụ.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ nyocha nzere ntozu jụọ ajụjụ gbasara ntinye anya ma ọ bụ ọtụtụ nhọrọ maka ntinye ohuru ọhụụ, Okpu Uhie chọrọ ka i duzie ma rụzuo ezi ọrụ na-eji Uhie okpu na-eburu n'uche ihe mgbaru ọsọ ikpeazụ iji kpochapụ ule ya. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọ dịghị usoro nkwenye akwadoro maka usoro a, ihe ọmụma ndị dị na njikwa nlekọta ọrụ ga-aba uru dị oke ọnụ.
Kedu otu esi emepụta ụlọ nyocha maka RHCSA? | RHCSA Lab